Ny fangatahana rindrina horonantsary P3.9 nitarika dia nihoatra ny famatsiana. 500 metatra toradroa ny tontam-bokin'ny led dia namidy androany, noho izany dia nanapa-kevitra ny hitazona 500 metatra toradroa hafa amin'ity videowall ity izahay.
Fa maninona no nalaza be ity maodely ity? Mahaliana ny fandinihana iray mampiseho fa noho ny efijery LED manofa trano dia mitombo haingana dia haingana, P3.9 no nibodo ny tsenan'ny fanofana.
P3.9 LED rindrina video ao anaty trano miaraka amina rafitra fanidiana haingana izay manatsara kokoa ny fisaka. Amin'ny famolavolana elektronika, ny maodely dia mampiasa circuit IC sy Shadow elimination circuit, avo lenta ireo endri-javatra roa ireo dia hiantoka ny fijerena sary ary tsy misy tsipika matoatoa eo amin'ny efijery rehefa hitanao akaiky izany.
Ary nohatsaraina ny fonosana ho an'ny takelaka fisehoan-javatra ao anaty ary ampitomboina amin'ny habetsaky ny kozatra, tsy afaka mamokatra vokatra tonga lafatra 100% izahay, na dia manao izay fara herinay hanomezana fahafaham-po anao aza.